अमेरिका निर्वाचन २०२०: अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जो बाइडन को हुन्? के उनले डोनल्ड ट्रम्पलाई निर्वाचनमा हराउन सक्लान्? - BBC News नेपाली_圓通快遞香港
अमेरिका निर्वाचन २०२०: अमेरिकी राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार जो बाइडन को हुन्? के उनले डोनल्ड ट्रम्पलाई निर्वाचनमा हराउन सक्लान्?
४ नोभेम्बर २०२० अद्यावधिक
डोनल्ड ट्रम्प र उनको थप चार वर्ष ह्वाइट हाउसको कार्यकालका बीच एकमात्र मानिस उभिएका छन् - जो बाइडन।
तर उनका विरोधीहरूका निम्ति बाइडन संस्थापनसँग जोडिएका "डाँडापारिका घाम" हुन् जसले बेलाबखत लाजलाग्दो गल्ती गर्छन्। (महिलाहरूको कपाल सुँघ्ने जसको अचम्मको बानी पनि छ।)
र्‍यालीमा भाषण गर्दै उनले भनेका थिए: "मेरा पुर्खा उत्तरपूर्वी पेन्सल्भेनीआका कोइलाखानीमा काम गर्थे।" उनीहरूले जीवनमा अवसर नपाएकोमा आफू क्रोधित भएको उनले बताएका थिए।
तर वास्तवमा उनका पुर्खा कोही पनि कोइलाखानीमा कामदार थिएनन् - उनले त्यो वाक्य (र अन्य कैयौँ वाक्य) एक ब्रिटिश राजनीतिज्ञ निल किनकको भाषणबाट चोरेका थिए।
के अमेरिकामा मतदान सकिएपछि राति नै निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउला?
पछि 'जो बम'का नामले परिचित भएका यस्ता विभिन्न गल्तीको शृङ्खलाको त्यो पहिलो कडी थियो।
सन् २०१२ मा आफ्नो राजनीतिक अनुभवबारे बखान गर्दै उनले आफ्नो भाषणमा भने, "मैले आठ जना राष्ट्रपतिलाई चिनेको छु, तीन जनालाई त अत्यन्त निकट रूपमा"।
राष्ट्रपति ओबामाको उपराष्ट्रपतिको रूपमा सन् २००९ मा उनले 'अर्थतन्त्रमा हामीले हानि पुर्‍याउने ३० प्रतिशत सम्भावना छ' भनेर मानिसहरूलाई त्रसित बनाइदिए।
उनले ओबामालाई वर्णन गर्दै यसो भनेका थिए "अफ्रिकी-अमेरिकी समुदायका पहिलो व्यक्ति जो प्रखर वक्ता छ, तिक्ष्ण र स्वच्छ अनि आकर्षक छ।" तापनि भाग्य नै भन्नुपर्छ अमेरिकाको पहिलो अश्वेत राष्ट्रपतिले उनलाई उपराष्ट्रपतिमा चुने।
त्यस्ता टिप्पणीका बावजुद अश्वेत मतदातामाझ उनी लोकप्रिय रहेका छन्। तर हालसालै एउटा रेडिओ कार्यक्रममा चर्चित अश्वेत प्रस्तोतासँग बोलेका कुरा निकै विवादित भए। उनले भनेका थिए, "यदि अझ पनि तपाईँलाई म र ट्रम्पमध्ये एक जना चुन्न कठिन भइरहेको छ भने तपाईँ अश्वेत होइन।"
'ट्रम्प र बाइडन दुवै रुस, चीन र इरानका ह्याकरको निसानामा'
अमेरिकामा प्रदर्शन जारी, ट्रम्प र बाइडनबीच आरोप-प्रत्यारोप
खासगरी कामदार तथा मजदुर वर्गलाई बाइडनले आफ्नो स्वतःस्फूर्त भाषणमार्फत् तरङ्गित पारिदिन सक्छन्। भाषणपछि श्रोतासँग उनी हात मिलाउँछन् र फोटो खिचाउँछन् - कुनै रकस्टारले जस्तै।
"उनी मानिसहरूसँग अङ्कमान गर्छन्, बोल्छन्, छुन्छन् र त्यो सबै वास्तविक हुन्छ। कृत्रिम हुँदैन," पूर्वविदेशमन्त्री तथा राष्ट्रपतिका पूर्वउम्मेदवार जन केरीले न्यूयोर्कर पत्रिकालाई बताए।
हिन्दू आमाले हुर्काएकी कमला अमेरिकी उपराष्ट्रपति पदको प्रतिस्पर्धामा
अमेरिकी निर्वाचनमा हुलाकबाट कसरी मतदान हुन्छ, अहिले धाँधली हुनसक्ने कुरा किन उठ्यो
पछिल्ला वर्षहरूमा "पीडितलाई विश्वास गरौँ" भन्ने साझा नारा बनेको छ
हालै दिएको एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रिडले भनेकी थिइन्: "बाइडनका समर्थकहरूले मेरो बारेमा सामाजिक सञ्जालमा निकै नराम्रा कुरा गरेका छन्।"
"उनी आफैँले केही भनेका छैनन् तर उनको प्रचार समूहले आडम्बर प्रदर्शन गरेको छ।"
डोनल्ड ट्रम्पले निर्वाचन जित्न चीनको सहयोग लिन खोजेको आरोप
ट्रम्पका प्रतिस्पर्धीमाथि 'अनुसन्धान नगर्ने पक्षमा' युक्रेन
'ह्वाइट हाउसले ट्रम्प-विदेशी नेता फोनवार्ताको विवरण नियमित प्रणालीमा राखेको छैन'
महाभियोगबारे भएको सार्वजनिक सुनुवाइ ट्रम्पका लागि 'ठट्टा'
दिदी मारियनको दृष्टिमा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प 'ढँटुवा र सिद्धान्तहीन'
युक्रेनलाई दिइने सहयोग रोक्न ह्वाइट हाउसले निर्देशन दिएको खुलासा
ट्रम्प छोडेर जो बाइडनलाई समर्थन गर्दै रिपब्लिकन नेताहरू
ट्रम्पले अमेरिकालाई आक्रोश, भय र विभाजनको घुम्टो ओढाए: बाइडन
यदि डोनल्ड ट्रम्प धेरै नै बिरामी परे भने राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी को-को सम्म पुग्न सक्छ?
यदि बाइडनले जिते भने उनको निम्ति लामो राजनीतिक यात्राको एउटा उत्कर्ष हुनेछ। तर यदि उनी हारे भने थप चार वर्ष उनकै शब्दमा 'संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन पूर्णत: नालायक व्यक्ति'को हातमा सत्ताको लगाम जानेछ।
केही वर्ष अघि उनलाई सन् २०१६ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने कि नहुने भनी प्रश्न गरिँदा बाइडनले भनेका थिए: "राष्ट्रपति नबनीकनै पनि म खुसीखुसी यो संसारबाट बिदा हुनसक्छु।"
अमेरिकाको चुनावमा कति खर्च हुन्छ?
भिडिओ, अमेरिका निर्वाचन २०२०: मत सर्वेक्षण कति विश्वसनीय
४ नोभेम्बर २०२०
भिडिओ, अमेरिका निर्वाचन २०२०: चुनावी अभियानमा कति खर्च हुन्छ? त्यो रकम कहाँबाट आउँछ?, समयावधि 3,00
अमेरिकामा उपराष्ट्रपति उम्मेदवार बनेकी कमला ह्यारिस को हुन्